I-Biography kaMongameli uGeorge Washington
UGeorge Washington (1732-1799) waba ngumongameli wokuqala waseMerika. Wahokela i-Army Continental ngexesha leMfazwe yeNguquko. Njengomongameli, wabeka ezininzi izinto ezisekho namhlanje.
I-George Washington yobuntwana kunye neMfundo
UWashington wazalwa ngoFebruwari 22, 1732. Waphulukana noyise eneminyaka eli-11 kunye nomntakwabo, u-Lawrence, bathatha inxaxheba. Umama waseWashington wayekhusele kwaye wayefuna, amgcine ekubeni angene kwiBrian British njengoLawrence wayefuna.
U-Lawrence wayephethe iNtaba yaseVernon, kwaye uGeorge wayehlala naye eneminyaka eyi-16 ubudala. Wayefundiswa ngokupheleleyo kwiColonial Virginia kwaye akazange ahambe ekolishi. Wayemhle kwiimathematika ezifanelwe nophando lwakhe olukhethiweyo lokuhlola.
Uyise waseWashington nguAugustine Washington, isityalo esinazo iihektare ezingama-10,000. Unina, uMary Ball Washington wafa xa iWashington yayincinci ngo-12. Wayenabo bazalwana ababini, u-Lawrence no-Augustine. Kwakhona waba nabazalwana abathathu, uSamuweli, uJohn Augustine, noCharles, kunye noodade omnye, uNksz Betty Lewis. U-Lawrence wabulawa yiNqununu kunye neSifo soThuba ngo-1752 eshiya iWashington kunye neNtaba yaseVernon. NgoJanuwari 6, 1759, uWashington watshata noMarta Dandridge Custis, umhlolokazi onabantwana ababini. Babengenabantwana kunye.
Ngomnyaka we-1749, iWashington yamiselwa njengomcebisi kwiCulpepper County, eVirginia emva kokuhamba kweNkosi Fairfax kwiiNtaba zeBlue Ridge.
Wayesemkhosini ukusuka ku-1752-8 ngaphambi kokuba akhethwe kwiVirginia House yaseBurgesses ngo-1759. Wathetha ngokumelene nemigaqo-nkqubo yaseBrithani waza waba yinkokheli kuMbutho. Ukususela ngo-1774-5 waya kwiiNgqungquthela zaseContinental. Wahokela i-Continental Army ukususela ngo-1775-1783 ngexesha le-American Revolution.
Emva koko waba ngumongameli weNgqungquthela yoMgaqo - siseko ngo-1787.
Umsebenzi wezempi waseGeorge Washington
UWashington wajoyina i-Virginia militia ngo-1752. Wadala waza wanyanzeliswa ukuba anikezele i-Fort Necessity kwiFrentshi. Washiya emkhosini ngo-1754 waza wabuyela ngo-1766 njengoncedo-de-camp kuGeneral Edward Braddock. Xa uBraddock wabulawa ngexesha leMfazwe yaseFransi neyamaNdiya (1754-63), wakwazi ukuhlala ezolile kwaye agcine idilesi ndawonye njengoko bebuya.
UMlawuli-oyiNtloko ye-Army yelizwekazi (1775-1783)
IWashington yayingumnye ogama linguMlawuli-oyiNtloko we-Army Continental Army. Lo mkhosi wawungafani nabaseBrithani abahlala rhoqo kunye nabase-Hesse. Wabakhokelela kwimpumelelo efana nokubanjwa kweBoston kunye nokutshatyalaliswa okukhulu kuquka ukulahlekelwa kweSixeko saseNew York. Emva kobusika kwiVall Forge (1777), amaFrentshi ayaqaphela i-American Independence. UBaron von Steuben wafika waza waqalisa ukuqeqesha impi yakhe. Olu luncedo lwakhokelela ekunyukeni kwenyuka kwaye iBritish izinikele eYorktown ngo-1781.
Unyulo njengoMongameli wokuqala (1789)
Nangona lilungu le-Federalist Party, iWashington yayithandwa kakhulu njengeqhawe lemfazwe kwaye yayiyikhetho elicacileyo njengomongameli wokuqala kubo bobabini be-federalalists kunye nabachasayo.
Kwakungekho livoti ekhethiweyo kunyulwa ka-1789. Kunoko, ukhetho lwasekholeji lukhethile kwiqela labaviwa. Ilungu ngalinye lekholeji lenze amavoti amabini. Umviwa ofumana iivoti ezininzi waba ngumongameli kunye nomgijimi waba ngu-vice-president. UGeorge Washington wanyulwa ngokungafaniyo onke amavoti angama-69. Umgijimi wakhe, uJohn Adams , wabizwa ngokuba nguMongameli wongameli.
Idilesi yokuqala yaseGeorge yase-Washington yathululwa ngo-Apreli 30, ngo-1789
UGeorge Washington wakwazi ukuphakama ngaphezu kwezopolitiko zemihla kwaye athathe zonke ivoti yokhetho - 132 ukusuka kumazwe angama-15-ukuphumelela kwikota yesibini. UJohn Adams, njengomgijimi-wenyuka, wahlala kwiNtloko kaMongameli.
Iziganeko kunye neempumelelo zikaMongameli waseGeorge Washington
Ulawulo lwaseWashington lwalunye lwezinto eziphambili kunye nemigangatho emininzi elandelwayo.
Ngokomzekelo, wayethembela kwikhabhinethi yakhe ngcebiso. Ekubeni i-khabhinethi yakhe yokumisela yayingenakunikwa, abaphathi banokukwazi ukuzikhethela zabo iikhabhinethi. Wakhetha umlandeli weJaji eliyiNtloko uJohn Jay ngaphandle kwebhentshi kunokuba asekelwe kwi-seniority.
Ekhaya, iWashington yakwazi ukuyeka umngeni wokuqala wolawulo kunye nokunciphisa ukuvukela kweWhiskey ngo-1794. Amafama asePennsylvania ayeka ukuhlawula irhafu, kwaye wathumela amabutho ukuqinisekisa ukuthotyelwa.
Kwimiba yelizwe langaphandle, iWashington yayingummeli omkhulu wokungathathi hlangothi. Wachaza ukuba isimemezelo sokungathathi hlangothi ngo-1793 esichaze ukuba i-US ayiyi kubakhethikela kwamagunya angamaqhawe njengamanje kwimfazwe. Oku kwakucaphukisa abanye abavakalelwa kukuba sinetyala elikhulu kwiFransi. Inkolelo yakhe yokungathathi hlangothi yaphinda iphinda ikhulunywe ngethuba lakhe kwi-Address Farewell Address ngo-1796 apho wayilumkisa ngokumelene nezizwe zangaphandle. Esi si lumkiso saba yinxalenye yelizwe laseMerika lezopolitiko.
IWashington ityikitye iSivumelwano sikaJay esasikhupha ilungelo le-United States lokungathathi hlangothi kolwandle oluvumela iBrithani ukuba ifune kwaye ibambe nantoni na eyayifumana kwiinqanawa zaseMerika ezihamba kwiibabi zeentshaba zaseBrithani. Ngokubuyisela, iBritish yaphuma kwiinkampu zephandle kwi-Northwest Territory. Oku kwagqitywa ngakumbi ukuxabana neBrithani enkulu kude kube ngu-1812.
Ngomnyaka we-1795, iTrackney's Treaty yasinceda ubudlelwane kunye neSpain ngokudala umda phakathi kwe-United States neSpain eqhutywe eFlorida. Ngaphezu koko, i-US yavunyelwa ukuba ihambe yonke i-Mississippi ngenjongo yorhwebo.
Ekugqibeleni, iGeorge Washington kufuneka ithathelwe ingqalelo njengomnye wabongameli bethu ababalulekileyo nabanomdla kubo bonke ixesha elihlala kulo namhlanje.
Ixesha likaMongameli kaMongameli waseGeorge Washington
IWashington ayizange iqhube okwesithathu. Wayethatha umhlala-phantsi eNtabeni iVernon. Waphinda wabuzwa ukuba abe ngumlawuli waseMerika ukuba i-US iya ekulweni neFransi phezu kwento ye-XYZ. Nangona kunjalo, ukulwa akuzange kwenzeke kumhlaba kwaye akazange akhonze. Wafa ngomhla kaDisemba 14, 1799 mhlawumbi ukususela kwintsholongwane ye-streptococcal yomqala wakhe okwenzakalayo xa ebhekwa ngokuphindwe kane.
Ukubaluleka kweWashington akukwazi ukugqithiswa. Wahokela i-Army Continental ukuze anqobe iBrithani. Wayekholelwa kwintsebenziswano enamandla karhulumente owawathintela kakhulu isizwe ngexesha lesibhozo iminyaka e-ofisi. Akazange avumele abanye ukuba bambambe njengamakhosi. Wayesebenza ngomgaqo wokufaneleka. Isilumkiso sakhe ngokumelene namazwe angaphandle sasithotyelwa ngabaongameli bexesha elizayo. Ngokwehla kwekota lesithathu, wabeka umzekelo wemiqathango emibini yexesha.
Amazwi anomdla ngokuphathelele kummeli uGrace Lee Boggs
Top 10 Enrique Iglesias Iingoma
Cinga NjengesiTaliyane, Thetha Njenge-Italian
Uludwe lweMetals Elements
Ukuhlaziywa Kwesixhobo Sokufudumala Kwezandla